Khilaafka guddoonka Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose oo gaaray heerkii ugu sareeyay - Caasimada Online
Home Warar Khilaafka guddoonka Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose oo gaaray heerkii ugu sareeyay
Khilaafka guddoonka Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose oo gaaray heerkii ugu sareeyay
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa si rasmi ah usoo ifbaxay khilaaf siyaasadeedka iyo midka awood qeybsi oo u dhexeeya Guddoonka Labada Gole ee Golaha shacabka iyo Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Somalia.
Khilaafka taagan ee soo ifbaxay ayaa waxaa markii ugu horeeyay daboolka ka qaaday Guddoonka Aqalka Sare oo tilmaamay inuu jiro is fahan daro ka taagan qaabka ay u wada shaqeyn lahaayen labada gole ee Aqalka Sare iyo kan hoose.
Khilaafka labada Gole ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay waxa uuna Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi si rasmi ah u joojiyay shir la filaayay inuu ka qabsoomo magaalada Baydhabo kaa oo u furmi lahaa Guddoomiyeyaasha Golayaasha sharci dejinta ee maamul goboleedyada, isla markaana uu qaban qaabinayo Guddoomiyaha Golaha shacabka.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka duulaaya isku dhex yaaca awoodaha shaqo ee labada Gole ayaa qoray Warqad uu ku hakinaayay shirka ka furmaaya magaalada Baydhabo, taa oo look ala diray dhammaan Hogaamiyayaasha Maamul goboleedyada, Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada maamul goboleedyada, iyadoo la wargaliyay Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Golaha shacabka.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa uu Warqada ku dalbaday in la joojiyo shirka lagu qaban doono magaalada Baydhabo, waxa uuna shirkaasi ku sheegay mid lagu burburinaayo Nidaamka Federaalka.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi, ayaa aaminay in Baarlamanaka hadda jira uusan garaneynin shaqooyinkiisa, isagoo u shaqeynaaya qaabkii uu u shaqeynaayay baarlamaanka 9aad ee wakhtigiisa dhamaaday.